Falaagada Ukraine oo wareejiyey sanaadiiqdii madoobaa ee diyaaradii Malaysia ee burburtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Falaagada Ukraine oo wareejiyey sanaadiiqdii madoobaa ee diyaaradii Malaysia ee burburtay
22nd July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Falaagada gooni u goosadka ee ka dagaallama bariga Ukraine ayaa ku wareejiyay 2 sanaadiiqda madow ah khubaro ka socota Malaysia, sanaadiiqdaasi oo ay lahayd diyaaradii Malaysia laga lahaa ee Khamiistii ku dhacday Bariga Ukraine.
Xoogagga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xabbad joojin goobta ay diyaaradda ku dhacday. Mar sii horreysayna, kooxdaas ayaa sii daayay tareen siday meydadka 282 ruux oo ka mid ahaa 298-kii qof ee diyaaradda saarnaa ee dhamaantoo dhintay.
Wareejinta sanaadiiqa madow ayaa yimid kadib markii khadka Taleefoonka ku wada hadleen Raysulwasaaraha Malaysia, Najib Abdul Razak iyo madaxa falaagada ka dagaalanta bariga Ukraine, Alexander Bourdais.
Khubarada reer Malysia ayaa sheegay in sanaadiiqda madow ee diyaaradda uu dhaawac gaaray, hase ahaatee ay shaqeynayaan.
Kubarada caalamiga ayaa sheegaya in sanaadiiqda madow ee diyaaraddu shaaca ka qaadi doonaan goortii dhibaatadu dhacaday iyo halka diyaaraddu socotay markii dhibku ku dhacay.
Sidoo kale, sanaadiiqda madow ayaa la filayaa in laga helo cod muujinaya sababtii diyaaraddu u burburtay.
Dhanka kale, golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si buuxda isugu raacay qaraar ku baaqaya, in baarayaasha caalamiga ah ay si aan faragalin iyo xanibaad lahayn uga howlgalaan, goobtii ay ku burburtay diyaaradii Malaysia Airlines, ee lagu soo riday Bariga Ukraine.
Qaraarka oo ay soo diyaarisay dawladda Australia ayaa ugu baaqay xoogagga hubaysan in ay joojiyaan ficilada wax ka bedeli kara goobta ay diyaaradda ku bur burtay.
Safiirka Ukraine u fadhiya Qaramada Midoobay, Yuriy Sergeyev, ayaa soo dhaweeyay qaraarka lagu cambaareeyey soo riditaanka diyaaradda rakaabka aheyd.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa ugu baaqay Ruushka in uu ku qalqaaliyo kooxaha gooni u goosadka ah, in ay la shaqeeyaan baaritaannada laga wado goobta ay diyaaradda ku bur burtay.
Safiirka Ruushka u fadhiya Qaramada Midoobay, Vitaly Churkin, ayaa u sheegay Golaha Ammaanka in dalkiisa uu diyaar u yahay in uu gacan ka geysto baaritaanka.
Dhanka kale, safiirka Mareykanka u fadhida Qaramada Midoobay, Samantha Power, ayaa tilmaamtay in qaararka laga kaaftoomi lahaa, haddii uu Ruushka ku dhaleeceeyn lahaa kooxaha gooni u goosadka ah, diidmadii ay u diideen kooxaha baaritaanka in ay goobta bur burka gaaraan.
17-kii bishaan July 2014 ayaa diyaarad ay laheyd Malaysia oo ka baxday dalk Holland, kuna jeeday Malaysia waxey ku burburtay bariga dalka Ukraine, halkaasoo ay ku dagaalamayaa falaagada gooni u goosadka ah ee Ruukhku taageero iyo ciidamada dowladda Ukraine.
Diyaraadda ayaa waxaa lagu dhuftay gentaal dhulka laga riday, hase ahaatee waxaa dhinacyada halkaas ku dagaallamaya wada dafireen iney diyaaradda toogteen.
Shirkahada Isgaarsiinta Soomaaliya oo ku heshiiyey iney is wacaan
Muqdisho: Qarax gaari oo lagu dilay gudoomiye waaxeed degmo